Madaxweyne Xasan oo raba in beesha caalamku caawiso maamul goboleedyada – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweyne Xasan oo raba in beesha caalamku caawiso maamul goboleedyada
Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo raba la taageero Maamul Goboleedyada dalka ayaa ku boorriyay beesha caalamka iney caawiyaan maamul goboleedyada dalka ka dhismaya.
Madaxweynaha oo ka hadlay munaasabaddii shalay lagu caleemasarayay madaxweynaha maamulka K/galbeed Soomaaliya, Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa beesha caalamka ka dalbaday iney door wanaagsan ka qaataan dhismaha iyo horumarinta maamullada dalka ka hanaqaaday.
“Beesha Caalamku ineey usoo deg degto maamul goboleedyada oo ay tayeeyso awoodda dhinaca maamulka, maamulka hadda laga dhisay Baydhabo hoolkaanaa u guri ah oo ma heystaan xafiisyo iyo xarumo maamulku ku shaqeeyo, waxaan rabnaa caalamku inuu yimaado oo maamulladan dhismaya wax lala qabto” ayuu yiri madaxweye Xasan.
Madaxweyne Xasan ayaa shalay magaalada Baydhabo uga qeybgalay caleemo saarka iyo hdaaritnta Shariif Xasan Sheekh Aadan oo dhawaan loo doortay inuu noqdo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Baay, Bakoo iyo Shabeellaha Hoose.
Baarlamanka Somalia dood dheer ka yeelanaya mooshinka ka dhanka ah RW Cabdilweli